शिक्षामा बजेट र सोच परिवर्तनको आवश्यकता
शिक्षाजस्तो पवित्र मन्दिरभित्र अन्योलता हुनु, देशको प्राथमिकताबाट टाढा राखिनु, अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको दुर्दशाबाट युवा वर्गमा प्रताडना छ । शिक्षित बेरोजगारहरूमा मनोदशा र वितृष्णाले प्रहार गरिरहेको अवस्थामा मुलुकको शिक्षित नागरिक विदेशमा बेचिएको छ । आ.व. २०७५-०७६ को बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी भनेर कुल बजेटको १०.२३ प्रतिशत अर्थात् रु. १ खर्ब, ३४ अर्ब, ५० करोड ८७ लाख छुट्याएको थियो । यसरी हेर्दा हाम्रो मुलुकले शिक्षा विकासको जगमा टेकेर प्राज्ञिक वर्गसँग हातेमालो गर्ने सोचमा खासै दिलचस्पी राख्नै सकेको छैन ।
बाफिया, २०७३ मा संशोधनको औचित्य र प्रभाव
वित्तीय मध्यस्थता बैंकको आधारभूत काम हो । यस्तो मध्यस्थता सेवामा जोखिम हुन्छ । त्यसैले बैंकिङ व्यवसायलाई जोखिमको व्यवसाय पनि भनिन्छ । लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताका स्वार्थ अनि कर्जा प्राप्त गर्ने ग्राहकका स्वार्थविपरीत हुन्छन् । लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताहरू आफ्नो रकम सुरक्षित र उच्च प्रतिफल युक्त होस् भन्ने चाहना राख्छन् भने कर्जाका ग्राहकहरू सरल र सुलभ दरमा वित्तीय स्रोत प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छन् । यी दुवैको स्वार्थलाई एकैपटक सम्बोधन गर्नु कठिन र जोखिमयुक्त काम हो ।
जापानमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या बढेर ९ सय नजिक पुग्दा ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । मंगलबारसम्ममा कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेर ५ पुगेको जापानका स्वास्थ्यमन्त्री कोइची हागिउदाले पुष्टि गरेका छन् । मंगलबार खानागावा प्रिफेक्चरमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित ८० वर्षीय महिलाको निधन भएको छ ।
नागरिक स्टक डिलर कम्पनी कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम मिति २०७६ माघ २९ गते बुधबार स्थापना भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । कम्पनीको अधिकृत पुँजी रु. १० अर्ब छ भने तत्काल जारी पुँजी रु. ५ अर्ब छ । त्यसैगरी कम्पनीले तत्काल चुक्ता गरेको पुँजी रु. ५ अर्ब छ, जसमा संस्थापक सेयरधनीहरूलाई ७० प्रतिशत सेयर स्वामित्व कायम गरिएको छ भने ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी हुनेछ । हाललाई संस्थापक सेयरधनीहरू नागरिक लगानी कोषको ५१ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. २ अर्ब ५५ करोड, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. ५० करोड र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको ९ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. ४५ करोड गरी जम्मा रु. ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले कम्पनीले आफ्नो कार्य अगाडि बढाउनेछ ।
नयाँ संविधानको घोषणा र राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यसँगै मुलुक आर्थिक समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेको छ । मुलुक हाल एकात्मक प्रणालीबाट संघीय प्रणालीको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा प्रवेश गरिसकेको मात्र छैन, नेपालको कृषिक्षेत्र विकासका निम्ति महत्वपूर्ण भौगोलिक अनुकूलता, वातावरणीय अनुकूलतासहितको सम्भावना भएको क्षेत्र हो । सरकारले प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गरी कार्यान्वयन गरिरहेकोमा कृषिक्षेत्र पनि पर्छ । कृषिमा छाएको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको लहर, प्रविधिको तीव्र विकास र नयाँ प्रविधिप्रति आमकिसानको आकर्षणले पनि अब नेपाल प्रविधिसहितको कृषि कार्यमा अगाडि बढ्यो भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
तपाईं इन्टरनेट प्रयोग गर्नुहुन्छ भने गुगलमा गएर ‘हुइच इज द पुवर कन्ट्री इन एसिया’ भनेर सर्च गर्नुस् । संसारकै सबैभन्दा ठूलो यस महादेशमा अफगानिस्तान र यमनपछि तेस्रो सबैभन्दा गरिब मुलुकको सूचीमा नेपाललाई पाउनुहुन्छ । जबकि एसियामा ४९ वटा मुलुक छन् । सबैभन्दा बढी भूभाग र विश्वका ६० प्रतिशतभन्दा जनसंख्या यही महादेशमा छ । एसियाका दुई–चारवटा देश र अफ्रिकाका केही देशबाहेक अरू अमेरिका, अस्टे«लिया, युरोप त धेरै नै समृद्धशाली महादेश हुन् ।
हालै भारतले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई मध्यनजर गर्दै यसले नेपालमा पार्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्न हतार भइसकेको छ । उदीयमान अर्थव्यवस्था बोकेको भारतमा ४५ वर्षयताकै उच्च बेरोजगारीको समस्या छ । ६ वर्षयतादेखि आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ । १ दशकयतादेखि वैदेशिक लगानी घटेको छ । न्यून आर्थिक सूचकांककै परिप्रेक्ष्यमा सन् २०२० को बजेट आएको छ अहिले । ५० प्रतिशतभन्दा बढी श्रम शक्ति आबद्ध कृषिक्षेत्रको योगदान भारतीय अर्थतन्त्रमा १६ प्रतिशत देखिन्छ । यी सबै बँुदालाई मध्यनजर गर्दै आगामी सन् २०२२ सम्ममा कृषिक्षेत्रको आयलाई दोब्बर बनाउने योजनाअनुरूप कुल बजेटको ५.२६ प्रतिशत बजेट भनौँ भारु १६ खर्ब रकम कृषिक्षेत्रमै विनियोजन गरिएको छ । त्यति मात्र नभई लघुवित्त र सहकारीमार्पmत भारु १५ खर्ब कर्जा विस्तार गर्ने योजना पनि बाहिर आएको छ ।
नेपालकोे अर्थतन्त्र चलायमान हनुमा रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा रेमिट्यान्सको हिस्सा धेरै हुने देशहरूमा नेपाल विश्वको तेस्रो स्थानमा पर्छ । गरिबी घटाउने, साक्षरता दर बढाउने, आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति गर्ने, कृषि, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा, विकासका पूर्वाधारहरूजस्ता क्षेत्रहरूमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने महŒवपूर्ण तŒव बनेको छ रेमिट्यान्स । आय आर्जनका अन्य क्षेत्रहरूबाट आशा गरेजति उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र चलायमान बनाउने रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धान्नुलाई अल्पकालका लागि रामै्र मान्नुपर्छ । तर, दीर्घकालमा पनि यसरी नै अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा भर पर्नु राम्रो मानिँदैन ।
राजधानी काठमाडौंको ठीक उत्तरपूर्वमा अवस्थित कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाअन्तर्गत एक पर्यटकीय महत्व बोकेको धार्मिक स्थल हो, कागेश्वरी महादेव मन्दिर । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं १ अन्तर्गत गागलफेदिमा यो मन्दिर अवस्थित छ । मुलुकले अहिले नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० भव्यताका साथ मनाउँदै आइरहेको अवस्थामा राजधानीभित्र रहेका विभिन्न धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बोकेका स्थानहरूमध्ये कागेश्वरी महादेव मन्दिर पनि एक धार्मिक पर्यटकीय महŒव बोकेको अत्यन्तै महत्वपूर्ण मन्दिर हो ।
हिजोआज आमउपभोक्ताको चुलो मूल्यवृद्धिका कारण प्रभावित भएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अप्रत्याशित रूपमा मूल्यवृद्धि भएका कारण जीवनयापनमा ज्यादै समस्या परेको हो । पछिल्लो समय बजारमा विभिन्न उपभोग्य सामानको मूल्य अकासिएको छ भने जताततै बिचौलियाका कारण उपभोक्ता मारमा परेका छन् । बजारमा खुलमखुला लुट मच्चिएको छ । अनुगमन गर्ने निकाय मौन छ । अनुगमन भए पनि त्यो ज्यादै कमजोर र प्रभावकारी नबनेका कारण जनता कालोबजारी र महँगीको मारमा परेका छन् । बढ्दो महँगीका कारण सबैको जीवन कष्टकर बनेको छ ।
केही समय पहिलेसम्म नेपालको सबै भूभागलाई जोड्ने माध्यमका रूपमा नदीनालाहरू मात्र रहेका थिए । यद्यपि, रेडियो नेपाल भने मस्तै सेरोफेरोमा गुन्जायमान थियो । वि.स. २०१७ मा राजा महेन्द्रले महेन्द्र राजमार्गको निर्माण शुभारम्भ गरेपछि जनताको जनतासँग जोडिने रहरले केही हदसम्म मूर्तरूप पाउन सफल भयो । यसका अतिरिक्त व्यापार र दैनिक आवश्यकता पूर्तिका लागि राष्ट्रका चारै दिशाका जनता भारत र तिब्बतसँग नजिक रहँदा नेपाली अर्थतन्त्र ध्रुवीकृतजस्तो देखिन पुगेको थियो ।
२०१९ मा विश्वभरि हुने रक्षा खर्च २०१८ को तुलनामा ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गत दशकको कुनै पनि वर्षमा भएको तुलनामा यो सर्वाधिक बढी हो । इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजले केही समय पहिला म्युनिख सेक्युरिटी कन्फरेन्समा आफ्नो वार्षिक रिपोर्ट ‘मिलिट्र ब्यालेन्स’ सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त रिपोर्टमा यो देखा परेको हो ।
जापानमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप दुई जनाको मृत्यु भएको छ । योकोहामा पोर्टमा रोकिएको डाइमन्ड प्रिन्सेस पानीजहाजमा संक्रमित पाइएका मध्ये दुई जनाको निधन भएको जापानी अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् । योसँगै जापानमा कोभिड १९ बाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ३ पुगेको छ । चीनमा समेत ज्यान गुमाएका जापानीको संख्या जोड्दा ४ हुन आउँछ ।